Ekugcineni - Insiza Yokugcina Unolwazi Ngokumaketha Kwezenhlalo! | Martech Zone
Ekugcineni - Insiza Yokugcina Unolwazi Ngokumaketha Kwezenhlalo!
NgoLwesithathu, Juni 3, 2015 NgoLwesithathu, Juni 3, 2015 Douglas Karr
Abantu abangakholeki kwaSocial Media Examiner sebethule umphakathi wabo wobulungu obukhethekile,
ISocial Media Marketing Society. Inhloso yeNhlangano ukukusiza uthole imibono emisha, ugweme ukulingwa namaphutha, usebenzise amasu amasha omphakathi futhi uthole ukuthi yini okusebenza kahle kakhulu ngokukhangisa ngemidiya yezenhlalo.
Lapho ujoyina iNhlangano, uzothola izikhathi ezintathu zokuqala zokuqeqesha inyanga ngayinye ezifika ngesikhathi, ezinobuhlakani futhi eziholwa ngochwepheshe. Lokhu kusho ukuthi uzoba nokuqeqeshwa okuqhubekayo okudingayo ukuze usebenzise wonke amaqhinga wokumaketha ezokuxhum abalulekile. Futhi, uzokwazi ukuxhumana nabathengisi abakanye nawe njengawe.
Akusadingeki uzibuze ukuthi ontanga yakho babhekana kanjani nezingqinamba ezifana nezakho. NgeNhlangano, ungaxhumana kalula nabanye abathengisi, wabelane ngamava futhi nisekelane.
Nansi ingxenye epholile. Konke kwenzeka online! INhlangano yadalelwa ukuthi ibe lula futhi ifinyeleleke kubakhangisi abamatasa njengawe. Ungaya emihlanganweni yokuqeqeshwa futhi uhlanganyele nabanye abathengisi kusuka enduduzo yesihlalo sakho sehhovisi – noma ngabe ukuphi emhlabeni! Iya lapha ukuze ufunde kabanzi.
Ithimba lakwaSocial Media Examiner selisebenze izinyanga eziyishumi nanye lakha indawo yabantu abanjengawe- abathengisi abamatasa nabaninimabhizinisi abafuna ukusebenzisa amaqhinga amasha omphakathi ngaphandle kwezilingo eziningi.
Bafunde ngaphezu kwabamakethi abangama-4,500 ukuze baqonde kahle izinselelo ezihlukile obhekene nazo. Nakhu abakutholile:
Umatasa ngempela futhi ufisa ukuthi ube nesikhathi esithe xaxa sokuhambisana nezwe eliguqukayo lokumaketha ezokuxhum.
Ufuna indlela elula yokuthola amaqhinga amasha omphakathi aletha imiphumela yangempela.
Ufuna ukuqeda ukulingwa namaphutha bese ugxila kokusebenza ngempela, ngaphandle kwakho konke ukuqagela nokuhlolwa.
Ufuna inzuzo yokuncintisana.
Ufuna ukugxila kokusebenza kahle kakhulu.
Abafundisi bakho bazoba ngongoti onqenqemeni oluhola phambili lwezokuxhumana; ongoti ku-Facebook, ku-Twitter, ku-LinkedIn nangaphezulu. ISocial Media Examiner inokufinyelela ebhentshini elijulile lochwepheshe bemboni abazokulethela amaqhinga akamuva, afanele kakhulu wezenhlalo ukukusiza ukuthi uhlale phambili.
Joyina Abanye Abathengisi Abangu-1000 + bese Uphendulwa Imibuzo Yakho Yezokuxhumana!
Ukudalulwa: Singabangani beqembu leSocial Media Examiner futhi sisebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo ukukhuthaza imicimbi yabo nokunikezwayo.
Tags: iqembu lokumakethaubulungu bokumakethaumphakathi wokumakethaubulunguUMichael StelznerI-Social Media Marketing Society
Isithwebuli sekhadi le-AtEvent: Shintsha futhi uthuthukise ukuThola okuholayo emicimbini
Ukuziphatha Kwe-inthanethi Kokuthenga Nokuthumela Kuthuthuka kanjani ku-2015